Raspberry | November 2019
Raspberry huruud ah
In jardiinooyin badan, xitaa ka mid ah agrotechnists hiitka ugu weyn, waa dhif ah si aad u hesho duurka raspberry jaalaha ah. Dadku waxay caadaysteen xaqiiqda ah in miro kululku casaanyahay, laakiin aan qaan-gooyin. Raspberries Red - waa qaraabo ah ee berry caadiga ah duurjoogta - raspberries kaynta. Hase yeeshee, marxaladdan isbedelka ah ee "hoylaawe" ah ayaa dhacay, taas oo keentay muuqaalka miraha raspberry midab casri ah.
Tiro yar oo naga mid ah ayaa arkay raspberries casaanka ah ee indhahayaga. Laakiin waxaa jira miro madow. Tani sidoo kale waa raspberry ah. Noocan ah dhaqanka raspberry waa sida xiiso leh wakiillada "dhaqameed". Berry raspberry madow ma aha mid aad u wanaagsan, tan iyo markii la xusay ee berry madow, dad badan ayaa leh urur leh blackberries.
Khamriga raspberry ee guriga, cuntada ugu fiican
Raspberries waa miro caansan, caadiyan waxaa loo isticmaalaa jamaan, saxarado, "fitamiino" (miro cusub, dhulka sonkorta leh), waxsoosaarka, sharoobada, ama si fudud u barafaysan. Laga yaabee in qof kasta ogyahay inuusan macmacaan macaan ahayn, laakiin sidoo kale khamriga waxaa laga samayn karaa raspberries. Berry waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo khamri raspberry cajiib ah guriga, iyaga oo u gaar ah.
Top 10 noocyada raspberries dayactirka ee gobolka Moscow
Raspberries - mid ka mid ah ugu caansan oo caafimaad qaba. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim inaad doorato noocyada saxda ah ee lagu beerayo aag gaar ah. Waxaan ku siinnaa noocyada ugu wanaagsan ee raspberries remontant ee kooxda dhexe. Atlant Atlant waxaa matalaya xayiraado dhexdhexaad ah, dhererkooda ugu sarreeya waa 1.
Sida loo qalajiyo caleemaha raspberry iyo sida loo soo saaro shaaha
Macmacaan raspberry ma aha oo qaali ah oo dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale badeecad aad u faa'iido leh oo loo isticmaalo daweynta hargabka. Si kastaba ha ahaatee, berry ma aha waxa kaliya ee laga heli karaa duurka raspberry. Sidaa darteed, maanta waxaan kuu sheegi doonaa sida caleemaha raspberry loo isticmaalo iyo sida ay faa'iido u yihiin, iyo sidoo kale fahamsan sida loo soo saaro.
Raashinka raspberry - daaweyn jecel caruurta iyo dadka waaweyn. Waxay kuqarmeeyaan dubista, cunista sonkorta leh cabitaan kulul, waxay ku faafinayaan rootiga. Waxaa loo diyaariyaa isticmaalka kulaylka iyo iyada oo aan lahayn. Dhamaan sifooyinka iyo tayada waxtarka leh ee raaxeysigan. Waxaan dooneynaa inaan kula wadaagno cuntooyin aad u fiican oo fudud si aad u samayso suugada raspberry.
Waxa la sameeyo raspberries ee xilliga qaboobaha: sida loo xiro macaanka, compote, sharoobada, sida loo dhigo iyo qaawi sonkorta
Berry berrik badan oo la xiriira carruurnimada. Waxaa lagu sheegay inta badan ee sheekooyinka dadweynaha, heesaha iyo epics, iyo waxay ka timid berrito taas oo aad u fiican ee lagu daaweeyo hargabka. In this article waxaan arki doonaa goosashada ee berry this for jiilaalka iyo guryaha faa'iidooyinka raspberries. Qodobbada waxtarka leh ee raspberry Raspberry waxay leedahay hodan ku filan nafaqooyinka: halista salicylic iyo asidorbic, macdanaha, wax soo saarka iyo fitamiinada, fareeshka, pectins iyo walxo kale oo badan.